हिमाल खबरपत्रिका | “विदेशी विद्यार्थी ल्याउन असम्भव छैन”
“विदेशी विद्यार्थी ल्याउन असम्भव छैन”
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे भन्छन्, “नेपाल विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने मुलुक बन्न सक्छ।”
नेतृत्वमा पुगेपछि नयाँ के गर्ने सोच्नुभएको छ ?
पहिलेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिंदै नयाँ योजना बनाएको छु । इक्यानका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नैतिकतापूर्ण व्यवसाय, शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका समस्याको समाधानलगायतका योजना तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछन् । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट प्राप्त कर उनीहरूकै हितमा लगाउन पहल गर्दैछु । इक्यानलाई स्मार्ट बनाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण पनि मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् ।
शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा थुप्रै अनियमितता देखिन्छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना छैन ?
शैक्षिक परामर्श दाता संघ/संस्थाहरूको छाता संगठन भएकाले यसको नीति र गतिविधिले सदस्यहरूमा प्रभाव पार्छ नै । थुप्रै राम्रा हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा रहेका केही अनियमितता र समस्याको पहिचान गर्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने छु ।
इक्यानको सदस्यता नलिएर पनि शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संस्था छन् नि !
सबै सदस्यहरूमा समान रूपले लागू हुने हाम्रो नीति, आचारसंहिता र विधान भित्र चल्न नचाहेर कोही कोही बाहिर बसेका हुनसक्छन् । तत्कालका लागि इक्यानको सदस्य नहुँदा केही फाइदा होला तर, दीर्घकालीन फाइदा भने सदस्य हुँदा नै हुन्छ । उनीहरूका समस्या बुझेर इक्यानभित्र ल्याउन मेरो पहल हुनेछ ।
देशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर पाइने अवस्था आयो भने तपाईंहरूकोे व्यवसायमा मन्दी आउला नि, है ?
वैश्वीकरणको यो समयमा त्यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । यहाँका शैक्षिक संस्था राम्रा भए र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि भयो भने विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई ल्याउने पनि इक्यानले नै हो । भोलिका दिनमा विद्यार्थी एकोहोरो बाहिरिने मात्र नभई भित्रिने क्रम पनि चल्छ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि नेपाल ल्याउन सम्भव छ ?
पाठ्यक्रममा सुधार, व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली र उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने हो भने असम्भव छैन । यहाँ अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रचुर सम्भावना छन् । नेपालको विविधता, प्राकृतिक स्रोत, बुद्धिज्म, संस्कृति पनि अध्ययनका थप विषय हुन् । शैक्षिक क्षेत्रमा औचित्यपूर्ण लगानी र थप सुधार भने जरुरी छ ।